नेपालमा भित्रियो एग्रिकल्चर ड्रोन
सरिता थारू	|| 26 August, 2021
नेपाल कृषिप्रधान देश । पछिल्लो समय युवापुस्ताको ध्यान कृषिले तान्न थालेको छ । त्यसो त नेपालमा पनि कृषिका नयाँ–नयाँ यन्त्रहरु भित्रिन थालेका छन् । यसैमध्येको एक हो– एग्रिकल्चर ड्रोन । यो ड्रोन कर्मा ग्रुप कम्पनीले नेपालमा पहिलोपटक ल्याएको हो । त्यसैले एग्रिकल्चर ड्रोन भनेको के हो ? यो केका लागि प्रयोग हुन्छ ? नेपालमा कसरी भित्रियो ? लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कम्पनीका अनुसन्धान तथा विकास निर्देशक सुचित श्रेष्ठसँग मेरोलाइफस्टाइलकर्मी सरिता थारूले गरेको कुराकानी :
एग्रिकल्चर ड्रोन भनेको के हो ?
एग्रिकल्चर ड्रोन भनेको कृषि कार्यमा प्रयोग हुने एकप्रकारको यन्त्र हो । जो नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको छ । यो बालीमा मल, बिउ र विषादी छर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । हामीले पनि किटनाशक विषादी र मल छर्नकै लागि यो ड्रोन ल्याएका हौं । अहिले हामीसँग यस्ता २ वटा ड्रोन छन् । यो सफल भयो भने अरु पनि ल्याउने योजना छ । यो त तरल मल छर्न मिल्ने हो अब बिउ र ठोस पदार्थ पनि छर्न मिल्ने ड्रोन ल्याउँछौं ।
यो ड्रोनको प्रयोगले किसानलाई कस्तो फाइदा हुन्छ ?
ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानका लागि यो ड्रोनले निकै सहयोग गर्छ । पहिलो त यसको प्रयोगले जनशक्ति कम लाग्ने भयो र उत्पादत लागतमा पनि कमी आउने भयो । साथै, विषादी छर्दा मनावीय स्वास्थ्यमा देखापर्ने समस्या कम हुन्छ । ड्रोनको प्रयोगले छरेको विषादी सबै बालीमा एकनाश पर्छ । अर्को कुरा यसले म्यापिङ गर्छ । त्यसपछि प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ । साथै, जुन ठाउँको बालीमा समस्या छ त्यहाँ मात्रै स्प्रे गर्न सकिन्छ ।
यसको मूल्य कति पर्छ ?
पहिलोपटक ल्याएकाले परीक्षणमै छ । जसकारण मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । फिल्डमै गएर किसानहरुलाई सिकाउनुपर्छ र उहाँहरु यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने भएपछि मूल्य निर्धारण गर्छौं ।
तपाईंहरुले कहाँबाट ल्याउनुभएको हो ?
हामीले चीनको लोभल कम्पनीबाट ल्याएका हौं ।
कर्मा ग्रुपले यो यन्त्र आफैले नेपालमा भित्र्याएको हो कि, किसानहरुको मागमा ?
२५ औँ बिघासम्म ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने युवा व्यवासायीहरुको मागमा हामीले ल्याएका हौं । विशेषगरी चितवनका किसानले व्यक्तिगत रुपमा नै माग गर्नु भएको छ । तर, यसलाई समूहमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्रुपको एकजनालाई तालिम लिएर थोरै क्षेत्रफलमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल यसको आधिकारिक बिक्रेता कर्मा ग्रुप अन्तर्गतको कर्मा डिजी टेक प्रा.लि. छ ।
नेपालमा भौगोलिक विविधता छ, यस ड्रोनलाई कुन–कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
खुला रुपमा बाली उत्पादन हुने क्षेत्रमा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, टनेल खेती गर्नेको लागि अलि समस्या नै पर्न सक्छ । राम्रोसँग चलाउन सकेमा पहाडदेखि तराईसम्मको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने थोरै र धेरै क्षेत्रफलमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो यन्त्र प्रयोग गर्नका लागि कति क्षेत्रफल उपयूक्त हुन्छ हामी हेरिरहेका छौं । जस्तै, फलफूल उत्पादन हुने सिन्धुलीको जुनार खेतीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर, हाललाई चितवनलाई लक्षित रहेर धान, मकै र तरकारी खेतीका लागि ल्याएका छौं । पछि जनशक्ति बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न गरिने छ । यसलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा उडान परीक्षण गरि सकेका छौँ । साथै, चितवनमा पनि उडाइसकेका छौं ।
नेपालमा यस्ता यन्त्र सञ्चालनका मापदण्ड चाहिँ के–के छन् ?
यस यन्त्रलाई प्रयोग गर्न अथवा उडाउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लाइसेन्स र अनुमति लिनुपर्छ । तर, अझै यसको लाइसेन्स लिइसकेको छैन । किसानलाई तालिम दिएर वर्षदिनमा लाइसेन्स लिन सकिन्छ । यसैगरी चितवनमा यसलाई लिएर जाँदा किसानहरुलाई सिकाउनका लागि पनि केही नियमहरु छन् । हामीले तालिम दिन्छौ र उनीहरुले तालिम पास गरिसकेपछि खरिद गरेर प्रयोग गर्न सक्छन् । किसानहरुका लागि मापदण्ड बनाएका छौँ । यो चलाउनका लागि कम्प्युटरको ज्ञान भएको, प्रोग्रामिङ्ग गर्न सक्ने, गणित विषय आउने यूवा किसानले तालिम लिनसक्छन् ।
यो तालिम लिन कति समय लाग्छ ?
कति समय लाग्छ भन्ने कुरा त्यो मान्छेमा भर पर्छ । अभ्यास गर्दा कतिको एक्टिभ भइन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । यो गाडी चलाए जस्तै अभ्यास गर्नुपर्छ । तर, गाडीमा टुडी हुन्छ भने यसमा थ्रीडी हुन्छ ।
यो ड्रोन कस्ता किसानलाई लक्षित गरी ल्याउनुभएको हो ?
हामीले व्यवासायीक रुपमा खेती गर्ने यूवा वर्गका किसानलाई लक्षित गरेका छौँ । हाललाई हामीले चितवनमा परीक्षण गरेका छौं । त्यो परीक्षण सफल भइसकेको छ अब देशव्यापी रुपमा जान्छौं ।
यसको माग कुन–कुन ठाउँबाट आएको छ ?
पोखरा, झापा, चितवन लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट माग आएको छ । हामीले चितवनबाट नै सुरु गर्दैछौँ । माग आउने बित्तिकै वितरण गर्न मिल्दैन । तालिम नदिई प्रयोगविहिन हुन सक्छ । विभिन्न प्राविधिक समस्या आउन सक्छ । चितवनमा सफल भयो भने अन्य क्षेत्रमा पनि वितरण गर्छौँ ।
नेपालमा यस्ता प्रविधि कत्तिको आवश्यक छन् ?
नेपाल आफैमा कृषिप्रधान देश हो । कृषि क्षेत्रलाई अब्बल बनाउनका निम्ति यस्ता किसिमको प्रविधि सरकारले पनि भित्र्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । यसका साथै कृषिमा विभिन्न प्रविधि छन् । नेपालमा यस्ता प्रविधिको निकै आवश्यक छ । हामीले ल्याएको यो ड्रोनमा विभिन्न टेक्निकल पक्षहरु छन् जुन परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।